Amabhonasi amahle kakhulu wabadlali baseCanada ngo-2020 - Amakhodi Ebhonasi Yekhasino Aku-inthanethi
Abadlali baseCanada bathuthele ukujoyina amakhasino aku-inthanethi futhi ukuthandwa kwalezi zingosi kukhombisa ukungabi bikho kokwehla. Kunezizathu eziningi ezenza ukuthi athandwe kangaka kufaka phakathi amandla okudlala yonke imidlalo yakho oyithandayo futhi ngethemba lokuwina eminye imiklomelo emikhulu yemali. Okunye isizathu ukulethwa kwamabhonasi nokukhushulwa amasayithi.
Imboni yokugembula eku-inthanethi iyincintiswano kakhulu. Amasayithi ayancenga ukuthola amalungu amaningi amasha ngangokunokwenzeka futhi ukwenza lokhu, kunikezwa amabhonasi amukelekile. Lokhu kungafaka ukuqondaniswa kwediphozithi yakho yokuqala, ukunikezwa kwe-spins yamahhala kumdlalo okhethiwe we-slot, izimemo zamahhala kuma-tournaments noma imali yebhonasi ethile.
Noma ngabe yini ibhonasi, kunemigomo nemibandela enamathiselwe kubo, ngokuvamile izidingo zokulawula okumele zigcwaliswe. Kubalulekile ukufunda le migomo nemibandela, noma ungenza amaphutha akubiza ibhonasi yakho. Kunamasayithi amaningi aqukethe imininingwane ewusizo mayelana nokuhamba phambili Amabhonasi e-Canada Canada 2020 kufanele unikele. Bheka amanye amabhonasi amahle kakhulu angabizwa ngabadlali baseCanada ngo-2020.
Uma uba yilungu laleli sayithi elidumile, kukhona ibhonasi eyamukelekile elindelwe. Eqinisweni, udotiwe ongakhethwa lapha ngoba kukhona amabhonasi ayisikhombisa amukelekile ongakhetha kuwo. Ingqikimba yendikimba yale amakhasino aku-inthanethi ayizithelo, ngakho-ke umqondo uwukuthi ukhetha izinhlobonhlobo zakho ozithandayo futhi ubone ukuthi yini ibhonasi yakhe eyamukelekile. Lokhu kufaka imali efanisiwe, imali ebuyiselwe emidlalweni yamakhasino bukhoma noma ispin yamahhala ku-slot yakho oyithandayo ngayo yonke i-C $ 1 (noma imali elingana). Izindlela eziningi ukukhetha kusuka lapho ezihlala zilusizo.
Nansi enye amakhasino aku-inthanethi lapho ungathola khona ibhonasi enhle yokwamukelwa. Inani olitholayo lincike kosayizi wediphozi yakho yokuqala. Lokhu kungu-100% ofaniswe kuze kufike ku-C $ 500 (ngesidingo sokulawula esingu-30x ukufeza) kepha akupheleli lokho. Ubuye uthole ama-spins wamahhala angama-200 kumdlalo we-slot ophezulu. Sekukonke, lelo bhonasi likuvumela ukuba uqale kahle ngale khasino ye-intanethi.
Uma ufuna ukuthola ibhonasi enkulu, khona-ke leli sayithi kuzofanele libe kuhlu lwakho. Lapho ujoyina iKassu, kunebhonasi efinyelela ku-C $ 1500 engafunwa. Lokho akuyona eyediphozi yokuqala oyenzayo nesayithi. Kukhona amabhonasi atholakalayo wamadiphozithi amane okuqala owenzayo kwi-akhawunti yakho entsha yakwaKassu. Isiza sisesimweni sokuphana kakhulu ngoba kukhona nama-300 spins wamahhala asendleleni eza kuwe. Zingasetshenziswa ku-Quest kaGonzo, Starburst, Aloha noma Red Riding Hood.
Lawa amanye nje amabhonasi amahle kakhulu laphaya. Izindaba ziba ngcono ngokwedlulele ngoba amasayithi anikela ngokuningi okunye ukukhushulwa ongakujabulela futhi unezela ngethemba inzuzo ozoyenza lapho udlala ku-inthanethi.
Ibhonasi ye-casino yamahhala:
I-35 ayikho ibhonasi yediphozi eDublinbet Casino
I-145 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-Thrills Casino
I-25 ayikho ibhonasi yediphozi e-Landing Ikhasi le-Casino
I-20 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi eCashmio Casino
I-55 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-ChanceHill Casino
I-45 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-Norges Automaten Casino
I-60 yamahhala i-spin bonus ku-SuomiAutomaatti Casino
I-70 ayikho ibhonasi yediphozithi ku-MondoFortuna Casino
I-165 yamahhala i-spin casino e-SekaBet Casino
I-150 yamahhala i-bonus e-AllAustralian Casino
I-140 yamahhala ivula ibhonasi yekhasino e-Paf Casino
I-40 ayikho ibhonasi ye-deposit ku-MagicalVegas Casino
I-80 ayikho ibhonasi yediphozi e-Estrella Casino
I-125 ayikho ibhonasi ye-deposit ku-Mrsmith Casino
I-160 yamahhala i-spin bonus ku-DrVegas Casino
I-70 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino edijithali ku-VegasSpins Casino
I-160 ayikho ibhonasi ye-casino ediphithi e-Scratch Mania Casino
I-125 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi eKaramba Casino
I-170 ayikho ibhonasi yekhasino ye-deposit lapha LAPHA Casino
I-85 yamahhala ihlumela ibhonasi yekhasino ku-SpilleAutomater Casino
I-145 yamahhala i-casino e-BitStarz Casino
I-80 yamahhala e-Devilfish Casino
I-105 yamahhala i-spin bonus ku-MondoFortuna Casino
I-90 yamahhala e-Euro Casino
I-80 ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti ku-PrimeScratchCards Casino